Burcad-badeed min 5 sano lagu xukumay - BBC News Somali
Burcad-badeed min 5 sano lagu xukumay
Shan nin oo soomaali ah ayaa maxkamad ku taal dalka Holland waxay khamisti galinki dame ku xukuntay min 5 sano oo xarig ah.
Waxaa lagu helay raggaas in ay sanadkii 2009 weerareen markab kuwa xamuulka ah oo marayey meel dibadda ka ah biyaha somalia,waxaana qabtay oo xiray ciidanka badda ee EU ee midowga yurub ee la dagaalamya burcad badeeda ka qaraabata badweynta ee maraakiibta afduubta,si ay madax furasho uga qaataan.
Raggaani maxkmadda kama hor qiran in ay galeen dambiga loo haystay,balse waxay sheegeen in ay yihiin kalluumeysato oo ay doonayeen in markbka ay gar gaar waydiistaan sababtoo ah doontii oo badweynta uga jabtay.
Laakinse qoraalo laga soo saxiixay ayaa shaqaalihii markabku waxay sheegeen in raggaan somalida ah ay wateen qoryaha dran-darooriga u dhaca iyo baasuuke ay ridayeen markii ay weerarka ku qaadeen markabka.
Inkastoo maxkamadd lagaga caddeeyey in ay dambigaas galeen oo xeer-iaaliyaha dawladuna waydiistay maxkmadda in 7 sano oo xarig ah lagu xukumo kiiba,haddana wuxuu sheegay inuu tixgaliyey duruufha adag ee ka jira Soomaaliya.
Mar sii horeysay oo bishan June ahayd ayaa markab ku taal Amsterdam waxay go'aan ku gaartay in kox somali ah oo loo haysto burcad badeednimo loo gacan galiyo Jarmalka,si maxkamad loogu taago afduub la sheegay in ay ku qafaasheen markab gnacsi oo jarmalku leeyahay oo ay ka qabsadeen bishii April meel dibadda ka ah eebta Soomaaliya.
Bishii December ee kal hore ayaa shirweyne lagu qabtay Hague oo looga hadlayey burcad badeeda wxay khubaradu ka shegen in ddaalkii lagu dhisi lhaa maxkamad caalami ah oo la saaro burcad badeeda somalida in caqabado kala soo arsen qawaaniinta baddaha iyo qaranimada somalia oo aan ciidan amni oo wax ku ool ah lahayn.